फसिएला नि बोर्डिङ स्कूलको फन्दामा ! - Jhilko
हिजोआज शिक्षा व्यापारको पर्यायवाची बन्दै गएको छ । शैक्षिक माफियाहरु विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने केन्द्र र कमाइ खाने भाँडोको रुपमा रुपान्तरण गर्दैछन् । जसले शिक्षाका नाममा दिनदहाडै गरीव नेपाली जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरु नै टाई र शूटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्रीहरुसँग सेल्फी खिचिरहेका हुन्छन् । यस्ता परिदृश्य टुलुलुटु हेर्नुपर्दा यो स्तम्भकार आफैं लाजले शिर झुकाउन बाध्य छ ।
शैक्षिक माफियाहरु शिक्षामा सिण्डिकेट लगाएर मनग्य पैसा धुतिरहेका छन्, सरकार रमिते बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, सरकार पनि उनीहरुसँगको कमिसनमा रमाएको छ । अझै भनौँ, सरकारलाई ती भ्रष्टहरुले खरिद गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरु विद्यालयको लोगो अंकित कपी छापेर, लोगो अंकित सर्ट, टाई र ट्रयाकसुट बेचेर, कोट र ज्याकेट बेचेर पैसा असुल्दैछन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो आशंका उत्पन्न हुन्छ कि यी माफियाहरुले सरकारलाई पनि कमिसन दिएका छन् र त सरकार चुपचाप छ । सरकारको कुन मन्त्री कस्तो छ र कसरी आम जनताका पक्षमा काम गरिहरको छ ? जनताले मूल्यांकन पनि गरिहेका छन् ।
जनताले सरकार समक्ष प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने, र अनुभूति गर्ने खालको शासन चाहियो भन्दै यो देशमा सरकारको स्थायित्वको माग वषौँदेखि गर्दे आएका हुन् । बल्ल जनताले सरकारको स्थायित्व होला कि भन्ने झिनो आशा गर्न थालेका छन् । सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रबृत्ति लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । निजी विद्यालयहरुले लोगो अंकित कपी छापेर ठगी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ लाइब्रेरीको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनै पनि शीर्षक यी शैक्षिक माफियाहरुले कुनै पनि कक्षामा लिन बाँकी राखेका छैनन् । माफियाहरुको सञ्जाल देशैभर बिस्तारित, सक्रिय अनि संगठित छ ठग्नका खातिर ! यसमा सय प्रतिशत नै उस्तै त छैनन् तर बाहुल्यता भने ठगहरुकै छ, सेवामुखी निकै कम छन्, अल्पसंख्यक ।
विद्यालय क्षेत्र हिजोआज शिक्षा आर्जन गर्ने भन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रुपमा मौलाउँदै गएको छ । शैक्षिक माफियाहरुलाई यो बहुमत प्राप्त सरकारले अव लगाम लगाउन ढिला भइसकेको छ । निःशुल्क छात्रबृत्ति माग्दा यी माफियाहरु कोटा सकिएको भन्दै पन्छिन खोज्छन् भने सूचना माग्दा बेवास्ता गर्छन । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शैक्षिक क्षेत्रका बुज्रुक माफियाहरु सूचनालाई चना सम्झिएर पचाइरहेका छन् ।
हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र भने शैक्षिक माफियाहरुको लागि महान चाडपर्व जस्तै गरी आएर महोत्सवका रुपमा मानिदै आएको छ । उनीहरु हरेक वर्ष हरेक कक्षामा पुरानै विद्यार्थी भर्ना भए पनि यो वा त्यो शिर्षकमा अविभावकको ढाड भाँचिने गरी पैसा असुल्ने गर्छन् । कतिपय विद्यालयले त झोला र किताबमा समेत कमिसन खाएर बेच्ने गरेका छन् ।
जसरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले केही महिना अघि एउटा ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरे, त्यसैगरी शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुलाई तह लगाउनै पर्छ । उनीहरुको सिण्डिकेट तोड्नै पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका यस्ता अनैतिक र गैर जिम्मेवार कुराहरु तिनै आफुलाई पढे लेखेका भन्ने शैक्षिक माफियाहरुले पालना गरिदिए यो देश बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा विकास र योगदान गर्नेहरुमा उनीहरुको नाम पनि दर्ज हुने थियो कि ?
त्यसैले अब सरकारले ती शैक्षिक माफियाहरुको बैँक खाता रोक्का गरी उनीहरुको हरेक सिण्डिकेट नतोडेसम्म यो क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले ती माफियाहरुको पहिचान गरी कार्वाही गर्न ढिला गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल अझै उच्चो हुँदै जान्छ र जनता मारमा पर्दै जनेछन् । यो देशमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको स्वाद गरीव र निमुखा जनतालले भन्दा पनि त्यस्तै माफियाहरुले मात्र लिइरहेका छन् । सरकार दृढ भएर आम शोषित, पीडित र दुःखी जनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्दै जाऊ जनता हमेसा साथ दिन तयार छन् ।
फेरि यता कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नामम पसल जस्तै ठगी खान पल्कनेहरुको पनि कुनै कमी छैन हाम्रो समाजमा । शैक्षिक माफियाहरु गाउँदेखि शहरसम्म उसैगरी सल्बलाई रहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरु (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महंगा झ्यालाझुलुकवाला पोस्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न ती बुज्रुकहरु तल्लिन छन् । शहरिया कलेजहरुमा साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीहरु आजकल फेसनका रुपमा स्थापित छन् । तिनै फ्याकल्टी नामक चाहारो छरेर विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा निजी प्लस टूहरु लागि रहेका छन् ।
आजकल शिक्षा यस्तो खुलेआम लुटिखाने भाँडो भएको छ कि ती माफियाहरु कति वर्ष पहिले कुनै विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याइदिए बापत उसको नाम र फोटो बेचेर ब्याज असुलिरहेका छन् । शहरमा कुनै त यस्तासम्म निजी कजेजहरु छन् कि ती कक्षा कोठा हुन् कि जेलघर हुन छुट्याउनै गाहे छ । शिक्षकहरुलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएकहरु अव कि त आफै सच्चिनु पर्छ कि त सरकार कठोर ढंगले उत्रिनु पर्छ । आइन्दा शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु किमार्थ यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार्य छैन ।
आज यसकारण नेपालभर बर्षा भयो
कोरोना प्रभावित देशबाट फर्केका २६ जना क्वारेन्टाइनमा, एक...
कतार, दुबई तथा भारतको विभिन्न स्थानबाट नेपाल फर्केका २६ जनालाई सिरहा र सप्तरीको...
नेपाली सेनाको नयाँ विमान भोली नेपाल आउँदै
नेपाली सेनाको माग अनुसार उक्त विमान इन्डोनेसियाली सरकारी लगानीको विमान कम्पनी पीटी...
सीएनएनको अटलान्टा हेडक्वार्टर घेराहाली प्रदर्शनकारीले प्रहरी...
अटलान्टामा उर्लिएको क्रुद्ध प्रदर्शकारीको एक भीडले अटलान्टास्थित सीएनएनको हेडक्वार्टरलाई...